Ebe obibi na Bulgaria maka ezinụlọ nwere ụmụ
Bulgaria, nke Oké osimiri Oké Osimiri Ojii dị nso n'ogologo 400 kilomita n'ogologo, na-enye ohere zuru oke maka ntụrụndụ n'oge okpomọkụ. Mana ọtụtụ ndị nne na nna na-echegbu onwe ha banyere ebe dị na Bulgaria ọ ka mma ka ha na ụmụ ha zuru ike.
Ebe dị jụụ, ebe dị jụụ - paradaịs dị mfe maka ntụrụndụ na nwa gị ọ hụrụ n'anya. Obodo oge ochie nke nwere ihu ọchị, nke mara mma nke mara mma, gbara ya gburugburu. N'elu osimiri nke oke osimiri enwere uzo di nwayo, o zuru oke. Sozopol nyere ntụrụndụ dị ukwuu maka ụmụaka nọ na Bulgaria: obodo ahụ jupụtara ebe egwuregwu, ihe ngosi mmiri, ugbo Ferris. Enwekwara Park Park ugbu a. N'ime ụlọ ndị a tụrụ aro maka ezinụlọ Arkutino Resort 4 *, Santa Marina 5 *, Laguna Beach Resort & SPA 4 *.
N'etiti ntụrụndụ ndị dị na Bulgaria, onye a ma ama na mba - Golden Sands - zuru oke iji zuo ike na ụmụaka. Na mgbakwunye na ala na-emighị emetọ n'ime oké osimiri, a na-atụ anya ka ndị njem nleta na-akpali akpali na obere ụgbọ okporo ígwè ma na-egwu nnukwu ọkụ. A na-enwe ihe nkiri mmiri na-eme egwuregwu na ogige ntụrụndụ n'ebe nile. Na mgbakwunye, ụmụaka nke afọ ọ bụla ga-enwe ezumike ezumike na aquapark "Aquapolis". Site na Golden Sands hotels maka di na nwunye, Gelios SPA & Resort 4 *, Melia Grand Hermitage 5 * na Mimoza 4 * kwesịrị ekwesị.
Anyanwụ na-acha odo odo
Ebe magburu onwe ya na Bulgaria, ebe ị nwere ike ịga na ụmụaka, bụ Sunny Beach, bụ ebe ndịda nke mba ahụ. Oké osimiri ebe a na-adịwanye ọkụ mgbe nile, na ntinye dị nro na-eme ka igwu mmiri ghara ịdị nchebe. Na mgbakwunye na ebe maka ntụrụndụ na-arụ ọrụ, ụmụaka ga-enwekwa mmasị ịga na ụlọ ngosi ihe nkiri nke oge ochie nke Nessebar na ịga na ụlọ ngosi mara mma. Astoria 4 *, Hrizantema 4 * na Strandja 4 * bụ ndị kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ nwere ụmụ.
Nke a bụ ebe dị mma ị ga-eji soro ụmụaka nọrọ jụụ. Ikuku dị na gburugburu ebe nchekwa dị ọcha dị ọcha ma na-agwọ ọrịa, oke osimiri na-agakwa n'oké osimiri. Ndị na-eme njem ezumike ga-enwe obi ụtọ na ogige ntụrụndụ, ogige ntụrụndụ ma ọ bụ ogige ntụrụndụ "Aquamania". Tụkwasị na nke a, na Albena bụ hotels kacha mma na Bulgaria nwere ogige mmiri maka ụmụaka: Laguna 4 *, Orchideya 3 *, Vita Park 3 *, Kom 3 *.
Elenite dị mgbagwoju anya na-ahụ na ụkwụ ala nke Stara Mapina Mountain. Na mgbakwunye na ịgbachi na obi iru ala ụmụaka, enwere mmasị, carousels, egwuregwu egwuregwu na nnukwu ogige mmiri.
Ka ezumike ezumike nwee ọganihu, ị ga-enweta visa na Bulgaria, ọ bụghị naanị maka onwe gị, kamakwa maka ụmụaka.
Marmaris - nleta nleta nleta
Ememe na Tunisia na umu
Narva - nleta nleta nleta
Ụlọ abụọ akwa oyi maka oyi azụ
Obodo kachasị ọcha na Russia
Kedu ihe ga - esi na Armenia?
Kedu ihe iji weta Crete?
Ebe obibi nke Egypt - Sharm el-Sheikh
Evpatoria - ebe nkiri
Obodo ukwu ndị dị n'ụwa
10 osimiri kachasị ama n'ụwa
Osimiri Sri Lanka
Ime ime na HIV
Kedu ka esi akụziri nwata ka o dinara n'ime ulo nna ha?
Haliksol - ihe ngosi maka ojiji
Mfịfụ nke imeju - mgbaàmà
Etu esi esi nri na meatballs?
Mmụta ọzọ maka ụmụaka
Egwu na-enye nwa ara
Jelii si na chokeberry oji maka oyi
Egwuregwu maka ndị nọ n'afọ iri na ụma
Kedu ihe ị ga-eyi?
Ime balloons maka ngụsị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ọta akara
Kedu ka esi esi akwaa akara?
Kedu ka ị ga-esi na-eto eto?
Sarafans maka ụlọ akwụkwọ
Ịzụ nwa n'ime ọnwa ise
Nkpuchi ojii site na ntụpọ ojii
Ngwá ojii Pink na nwa - ọrịa ahụ dị egwu, na otu esi emeso ya?
Ego ole ka okpomọkụ nke ARVI nọ na nwata?
Lagman si anụ ezi
Eggplants - ọrịa na akara ha
E jidere Ex-enyi nwoke Heidi Klum maka inweta ọgwụ ọjọọ